Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Itoobiya oo Qaxooti Soomaaliyeed Ku Xasuuqay Xerada Qollaji.
Ciidanka Itoobiya oo Qaxooti Soomaaliyeed Ku Xasuuqay Xerada Qollaji.
Posted by ONA Admin	/ August 7, 2018
Wararka naga soo gaadhaya xerada qollaji oo ay ku sugan yihiin qaxootigii ay Oromadu soo baro kiciyeen oo ku ku taala duleedka magaalada Jigjiga ayaa shegaya in shalay ciidanka Gumaysiga Itoobiya ay shacab Soomaaliyeed ku xasuuqeen xeradan.
Ciidanka Gumaysiga Itoobiya ayaa rasaas ku furay shacabka Soomaaliyeed ee xeradan ku sugnaa kadib markay shacabku banaanbax kala hor tageen kolonyo ciidanka Gumaysiga Itoobiya kamid ah oo kusii jeeday magaalada Jigjiga. Shacabka ayaa ku dhawaaqayay hal-kudhagyo ka dhan ah ciidanka Itoobiya sida ” Itoobiya ha dhacdo, Soomaalidu ha xorowdo, nooga noqda dhulkeenna iyo erayo lamid ah”.
Falkan ayaa keenay khasaare balaadhan oo dhimasho iyo dhaawacba leh. Tirada dadka ku dhintay falkan ayaa gaadhaya 8 qof iyo dhaawac aad u badan oo qaarkood halis uu yahay. Waxaa nasoo gaadhay magacyada qaar kamid ah shacabkii sida xaqdarrada ah loo xasuuqay waxayna kala yihiin.
1- Maxamuud Awal
2- Maxamed Xasan
3- Faadumo Xasan Aadan
4- Nimco Muxumad
Shacabkan la xasuuqay ayaa kasoo qaxay xasuuqii ay Oromadu ka fuliyeen deenaada Soomaaliyeed ee ku teedsan xadka labada qawmiyadood. Markale ayuu qaxootigii Qollaji ka qaxay xeradii ay qaxootig ahaanta u joogeen.